कसरी लि Add्कइनमा ईमेल ठेगानाहरू थप्ने Martech Zone
लिंक्डइनमा कसरी ईमेल ठेगानाहरू थप्ने
LinkedIn यसको जोडिएको सेक्सन सेक्सन परिवर्तन गरियो र, मेरो विचारमा, ईमेल ठेगानाबाट सम्पर्क थप्नको विधिलाई गाड्न लाटो कदम बनायो। मलाई थाहा छैन उनीहरूले यो काम किन गरे तर यो अबaचरण प्रक्रियाको सट्टामा लिने दुई कदमहरू ले लिने गर्‍यो। सम्भवत यो पृष्ठ हो जुन म लिंकडेनमा प्राय भ्रमण गर्दछु जब म भाषणहरू वा सम्मेलनहरूबाट फर्कन्छु। म ती फोलकहरूको ब्यवसाय कार्डहरूमा जान्छु जुन म संकलन गर्दछु र तिनीहरूसँग कनेक्ट छु।
नयाँ उपयोगकर्ता ईन्टरफेसमा, ईमेल ठेगानाबाट कनेक्शनहरू थप्न, निम्न चरणहरू निम्न छन्:
क्लिक गर्नुहोस् जडानहरू थप्नुहोस् शीर्ष दायाँमा तपाईले लिked्कइनमा लगईन गरेपछि।
क्लिक गर्नुहोस् कुनै ईमेल दाहिने हात पट्टि आइकन।
अन्तर्गत जडान गर्नका लागि अधिक तरिकाहरू, क्लिक गर्नुहोस् व्यक्तिगत ईमेल द्वारा आमन्त्रित गर्नुहोस्.
तपाईंको ईमेल ठेगाना टाइप गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् निमन्त्रणा पठाउनुहोस्.
टैग: जडानहरू थप्नुहोस्ईमेलLinkedIn
हलिडे ट्रेन्ड बजारहरू बेवास्ता गर्न सक्दैन
डिसे 1, 2012 मा 11: 39 AM
किन केवल नामको आधारमा खोजी गर्नुहोस् र जडान क्लिक गर्नुहोस्?
डिसेम्बर १, २०१ 1 2012:२:1 अपराह्न
एक पटकमा? कुनै हालतमा हुदैन! यसले मलाई ती सबै एकैचोटि थप्नको लागि अनुमति दिन्छ।
डिसे 2, 2012 मा 11: 57 AM
हो, यो ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो तपाईं र म सधै असहमत रहन्छु। म व्यक्तिहरू लिंक्डइनमा थप्दिन जबसम्म म उनीहरूसँग साँच्चिकै "जडान" गर्छु। यो कति सामूहिक खेल होईन भनेर हेर्न म कति कनेक्शन प्राप्त गर्न सक्छु।
जब म घटनामा जान्छु म फर्केर आउँछु र पाँच व्यक्तिलाई जडानको रूपमा थप्दछु। बाँकीहरू या त MQL वा SQL को रूपमा बिक्रीफोर्समा जान्छन्।
डिसेम्बर १, २०१22012:२:12 अपराह्न
यदि कसैले मलाई उनीहरूको व्यवसायिक कार्ड दिए वा मसँग साइट वा ईमेल मार्फत जडान गरिएको छ भने हामी जडित छौं। म त्यो सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दिन - तर संसाधनको खोजीमा यो कहिलेकाँही काम आउँछ। मलाई जडानहरूको संख्याको बारेमा मतलब छैन, म आफ्नो नेटवर्कको पहुँचको बारेमा ख्याल राख्छु। र यो काम गर्दछ!